I-China Movable Medical Oxygen O2 Plant With Cylinder Filling Station Manufacture and Factory |I-Huayan
I-Movable Medical Oxygen O2 Plant With Cylinder Filling Station
Ukunikezwa kwamandla kagesi:380V/50HZ/Isigaba Ezintathu (esingenziwa ngokwezifiso)
Ukunikezwa kwamandla kagesi:220V/50HZ/Isigaba Esisodwa (esingenziwa ngokwezifiso)
Ubuchwepheshe:I-Pressure Swing Adsorbtion
Amandla:3Nm3/h - 150Nm3/h
Ilayisha Imbobo:Shanghai, China
I-XUZHOU HUAYAN GAS EQUIPMENT CO., LTDIjeneretha ye-oxygen isebenzisa ubuchwepheshe be-Pressure Swing Adsorption ukukhiqiza umoya-mpilo emoyeni ocindezelwe.
Uchungechunge lwe-HYO Ama-Oxygen Generator ayatholakala ngamamodeli ajwayelekile ahlukene anomthamo osukela ku-3.0Nm3/h kuya ku-150 Nm3/ihora ku-93% ±2 ubumsulwa .Umklamo wenzelwe ukusebenza ubusuku nemini 24/7 .
Izinga lokugeleza: 3.0 Nm3/h kuya ku-150 Nm3/h
Ubumsulwa: 93% ±2 (ngokuya ngezidingo zekhasimende)
Izinga lamazolo: -50°C
Izinga lokushisa lokusebenza: 5°C - 45°C
Izici ze-90% -95% I-Oxygen Generator
1) Yamukela isixhumi esibonakalayo sekhompiyutha yomuntu kanye nokulawula okuhlakaniphile ukuze wenze ukusebenza okulula futhi unikeze igesi lomoya-mpilo elifanelekayo ngokushesha.
2)Ubuchwepheshe bokugcwalisa obusebenza kahle kakhulu besisefo samangqamuzana, ukwenza i-ZMS iqine kakhulu futhi isebenze isikhathi eside.
3) Yamukela izinhlobo ezidumile zomhlaba jikelele ze-PLC namavalvu womoya, ukuze ushintshe ngokuzenzakalelayo futhi wenze ukusebenza kuzinze kakhudlwana.
I-4) Ukucindezela, ukuhlanzeka kanye nokugeleza kuzinzile futhi kuyalungiseka, kungahlangabezana nezidingo ezahlukene zamakhasimende.
5) Isakhiwo esiqinile, ukubukeka okuhle, nendawo encane yokusebenza.
Izicelo ze-90% -95% I-Oxygen Generator
1) Ukwelashwa kwendle: i-aeration enothile nge-oksijini yodaka olucushiwe, i-oxygenation yamachibi kanye nokuvalwa kwe-ozone.
2)Ukuncibilika kwengilazi: ukuncibilika okusekela ukuvutha, ukusika ukuze kwandiswe isivuno nokwelula impilo yesevisi yezitofu.
3)Ukwenziwa kwe-pulp bleaching kanye nokwenza iphepha: ukushintsha ukuxubha nge-chlorinated kuya ekufakweni kwe-oksijini okunothiswe ngezindleko eziphansi, ukucocwa kwendle.
I-4) I-metallurgy yensimbi engeyona i-ferrous: ukuncibilika kwensimbi, i-zinc, i-nickel, i-lead, njll. Ubuchwepheshe be-PSA kancane kancane buthatha indawo yobuchwepheshe be-cryogenic.
I-5) Imboni ye-Petrochemical kanye namakhemikhali: ukwandisa isivinini sokusabela kanye nokukhiqizwa kwamakhemikhali ngokuthatha ukusabela kwe-oxidizing okunothiswa komoya-mpilo.
I-6) Ukwelashwa kwe-ore: sebenzisa umoya-mpilo egolideni, njll. inqubo yokukhiqiza, ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokukhipha insimbi eyigugu.
7) I-aquaculture: ukwandisa umoya-mpilo oncibilikisiwe emanzini ngokufaka umoya-mpilo okunothiswe komoyampilo ukuze kuthuthukiswe kakhulu isivuno sezinhlanzi, futhi kungasebenzisa umoya-mpilo lapho kuthuthwa izinhlanzi eziphilayo.
I-8) Ukuvutshelwa: ukufaka umoya-mpilo esikhundleni somoya ekuvutshelweni ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle kakhulu.
9) Amanzi okuphuza ahlinzeka nge-oxygen ku-ozone generator ukuze kubulawe inzalo.
10) Ezokwelapha: ibha ye-oxygen, ukwelashwa komoyampilo, ukunakekelwa kwezempilo ngokomzimba, njll.
Imodeli Ejwayelekile Nokucaciswa
AMANDLA OKUGCWALA AMACYLIND USUKU
Ungasithola kanjani isicelo?Okwenziwe ngokwezifiso kuyamukelwa.
Izinga lokugeleza kwe-O2 :______Nm3/h (mangaki amasilinda ofuna ukuwagcwalisa ngosuku(amahora angama-24)
O2 ubumsulwa :_____%
Ukucindezela kokukhipha i-O2 :____ Ibha
Ama-Voltage kanye Nemvamisa : ______ N/PH/HZ
I-Oxygen Generator System yakhiwe .I-Air Compressor, I-Air Receive Tank,I-Frigerant Dryer &Precision Filters, I-Oxygen Generator,I-Oxygen Buffer Tank, Isihlungi Esiyinyumba,I-Oxygen Booster,Isiteshi Sokugcwalisa I-Oxygen.
Okwedlule: I-Containerized Nitrogen Generator System
Olandelayo: I-GOW-60/4-150 I-4-Stage Compression Compressor ye-Oxygen Booster Compressor engenawo uwoyela
I-Medical Oxygen Generator
Isitshalo se-oxygen esifakwe emabhokisini esibhedlela
Umsebenzi Wokonga Amandla we-Psa Nitrogen Generator...
Ithebula lepharamitha yepharamitha ye-diaphragm yochungechunge lwe-GV
I-Oilfield enengcindezi ephezulu Ibuyisela iPiston Com...
Umsebenzi osindayo we-Hydrogen Oxygen Helium Gas Booster D...
I-High Purity Oxygen Compressor Natural Gas Hydro...